Baro-Bixinta Ay Ereyada Qalaad Ku Hayaan Af-Soomaaliga(WQ: Yuusuf Cismaan Cabdille "Shaacir")
(Hadhwanaagnews) Wednesday, August 09, 2017 10:28:00
Afafku way kala ergistaan ereyada qaarkood laakiin waa marka afkaasi u baahdo in uu soo amaahdo erey laga waayay afkiisa. Af-Soomaaliga waxaa ka buuxa
Afafku way kala ergistaan ereyada qaarkood laakiin waa marka afkaasi u baahdo in uu soo amaahdo erey laga waayay afkiisa. Af-Soomaaliga waxaa ka buuxa ereyo lagaga maarmi karo ergisashada af qalaad. Wakhti oo Carabi ah wuxuu Soomaaligu u leeyahay ammin, xilli, iyo kansho. Sidoo kale ereyga jaar oo isna Carabi ah Soomaaligu wuxuu u leeyahay deris, olog iyo ood-wadaag. Waxa jira ereyo badan oo arrimo kala duwan
loo adeegsan karo asalkooduna Soomaali yahay laakiin aynu u soo amaahano ereyo la mid ah oo aan baahi loo qabin.
Ammin, xilli, kansho
Deris, ood-wadaag, olog